OpenGeo Suite: Nnukwu ihe atụ nke GIS Software chere banyere adịghị ike OSGeo - Geofumadas
Machị, 2014 Geospatial - GIS, qgis
Taa, ma ọ dịkarịa ala na gburugburu ebe obibi, ọkachamara ọ bụla nwere echiche na-anọpụ iche na-amata na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ dị ka ngwanrọ dị ka ngwanrọ azụmahịa, na n'akụkụ ụfọdụ.
Standardskpụrụ ụkpụrụ ahụ rụrụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na nguzozi ya nke imelite na ihu ike nke mgbanwe teknụzụ chọrọ bụ ihe a na-enyo enyo, ikekwe ọ bụ ihe tọrọ ntọala iji mee ka e nwee ihe ịga nke ọma na mbọ ndị ọzọ dị ka obodo, usoro ọgụgụ isi, akụnụba na echiche ndị ọzọ ejiri mee ihe iji gosipụta ihe atụ ahụ. na n'ikpeazụ dịkwa mkpa.
Agbanyeghị, ire Open Source adịghị mfe na azụmaahịa ma ọ bụ gburugburu gọọmentị, maka ọtụtụ ebumnuche nke na-esite na asọmpi ahụ kamakwa dị ka nsonaazụ a na-apụghị izere ezere nke adịghị ike nke ụdị ahụ, nke ga-agbanwe ma bikọ ọnụ na ngwanrọ nwere. Ndị na-eme mkpebi na-ajụ onwe ha ajụjụ dịka:
Ọ bụrụ n'otu ụtụtụ nsogbu na - apụta n'ihi mmelite sitere na nyiwe ndị ọzọ, n'akụkụ ndị dịka nchekwa, onye na - aza mgbe anyị chọrọ nkwado, oleekwa ihe ịhapụrụ ya maka mmefu ego?
N'iburu uzo di iche iche nke asusu ndi ozo, akwukwo akwukwo, ihe ndi ahia, ihe ngota, ihe nchikota anyi kwesiri ịhọrọ iji dozie ndakọrịta? anọghị mkpokọta?
OpenGeo Suite bụ ihe ngwọta ọ bụghị naanị na-eji oge ntozu zuru oke nke ngwaọrụ ndị dịnụ, kama ọ na-ezube ịzaghachi adịghị ike ndị ahụ na ụdị ahụ. Na mgbakwunye na inye obodo ihe ngwọta nke ha nwere ike ime ka atụmatụ mmepe ha kwalite, ọ na-emepụta ihe jikọrọ ọnụ maka ihe ndị metụtara iji duzie evolushọn ha yana, maka ụlọ ọrụ, OpenGeo Suite dị mkpa iji kpebie ihe mepere emepe. Ọ bụ ezie na enwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mgbe oge nyochachara usoro ọzọ a, enweghị m nhọrọ ọ bụla mana ị mata ikike dị elu na ihe okike nke ndị na-eche echiche n'azụ Boundless, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ihe ngwọta a.
Ka anyị leba anya n'ụfọdụ ihe OpenGeo Suite pụtara:
Kedu ngwaọrụ OpenGeo Suite gụnyere?
Inwe ọtụtụ nhọrọ ngwọta adịghị njọ, ọ bụ ihe nkịtị, ọ bụ ezie na ọ na-esikwu ike otu esi eme ka ahọpụta nhọrọ nke ngwaọrụ na usoro mmepụta ihe. Nhọrọ na-ezighi ezi nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị amata mgbe anyị etinyeworị mgbalị na nyocha, mmepe, ọzụzụ na karịa oge niile na-enweghị ike iweghachi.
Iji maa atụ, naanị n'okwu asụsụ mmepe anyị nwere mgbaghoju anya sitere na mkpa ndị obodo, ọtụtụ n'ime ha na-eme otu ihe ahụ, ndị ọzọ na-e inomi na ụtọ ọzọ, ụfọdụ nwere njirimara pụrụ iche na usoro dị mfe anyị ga-achọ ịnweta ha niile. Ka anyị lee nkewa a site na ọrụ na asụsụ; Agbanyeghi na aghaghi m ikwu eziokwu, nhazi a adighi ma erughi na ufodu o siri ike ikpa oke:
Na ọkwa ndị ahịa, nke bụ ihe kachasị ewu ewu, bụ: QGis, Grass, ILWIS, SAGA, Kapaware, dabere na C ++. gvSIG, ima elu, uDIG, Kosmo, LocalGIS, GeoPista, SEXTANTE, nke sitere na Java. MapWindow maka akụkụ ya na ActiveX dabere na .NET.
N'ọbá akwụkwọ anyị nwere: GDAL, OGR, PROJ4, FDO, GEOS na C ++. GeoTools nke Java, WKB4J, JTS, Baltic. NTS, GeoTools.NET, SharpMap karịrị .NET.
Banyere data data, Postgres bụ onye a na-achịkwaghị achịkwa, ọ bụ ezie na e nwere ihe ngwọta ndị ọzọ.
Ihe ndị dị n'elu na-egosi anyị na ọ ga-ekwe omume ịkwado usoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gburugburu ọ bụla. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha, ọ bụ ezie na a mụrụ ha n'otu asụsụ, na-akwado ndị ọzọ ugbu a. A mụrụ ọtụtụ n'ime ha dị ka ndị ahịa mana ha nwere ike ijikwa data weebụ yana n'ọnọdụ ndị dị ka Open Layer ọ ga-ekwe omume ịmalite na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile emere na ngwa ahịa.
Kedu ngwakọta ngwanrọ eji eme ihe?
OpenGeo suite kpebiri QGis Dịka onye ahịa desktọọpụ, ịnweela ụdị edemede nke Geofumadas ugbu a. Maka weebụ, ha họọrọ GeoServer dị ka ihe nkesa data na-arụ ọrụ na Tomcat, Jetty dị ka gburugburu ebe obibi Java, GeoWebCache maka tessellation na OpenLayers dị ka ọbá akwụkwọ, ọ bụ ezie na nhọrọ ikpeazụ a enweghị ndebanye aha iwu, na-atụle azịza dịka Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ nke na-eto eto yana nnukwu ihe ịga nke ọma, ọkachasị n'ihi ihe nlereanya ya dabere na Plugins na ikike ya na ngwa mkpanaaka. Hụ na ị nwere ike ịgafe otu usoro nke asụsụ mana m ga-achọ ịhụ matrik nke nyocha nke dugara gị na nkọwa a.
Ka anyị doo anya, onye ọ bụla nwere ike mejuputa azịza ndị a n'otu n'otu. Ihe OpenGeo nwere bụ onye nrụnye nwere ụdị nke ihe ndị a nwere mmelite iji mee ka usoro omume na-agwụ ike rụọ ọrụ nke ọma; ọmụmaatụ:
Onye nrụnye na-eme ka mgbakọ ahụ dị ọcha. Inwe ike ịhọrọ nke akụrụngwa ịwụnye, wepu ma ọ bụ iwepụ. Maka ndị na-arụrụ aka na injin oge Java nwere Error 503 nwere obi ụtọ ga-amata uru ọ bara.
Enwere ndị nrụnye dị iche iche: maka Windows, Mac OS X, CentOS / RHEL, Fedora, Ubuntu, na Sava Ngwa.
4.02dị 9.3.1 na-adịbeghị anya na-eweta PostgreSQL 2.1.1, PostGIS 10, GeoTools 2.4.3, GeoServer 1.5 na GeoWebCache 3; ma kwado OpenLayers XNUMX.
Emepụtara njikọ dị mma na menu mbido ịkwụsị ma ọ bụ bido GeoServer na Postgres; iji bulie elu njirimara onye ọrụ maka itinye data ụdị profaịlụ na Postgres (shp2psql) yana ịbanye na nchekwa data PostGis (PgAdmin).
Ọzọkwa na menu mmalite enwere ohere ịnweta localhost, nke na ụdị a na-ewepụ interface nke ndị ahịa nke nsụgharị 3, yana ngalaba nchịkwa dị ọcha maka ọrụ GeoServer, GeoWebCache na ọrụ GeoExplorer.
Ngwaahịa a, GeoExplorer bụ mmepe dị egwu nke Boundles dabere na GeExt nke na-eme dị ka onye na-ekiri data maka GeoServer, na-enye ohere ibugo data site na faịlụ mpaghara ma ọ bụ site na ụlọ nkwakọba ihe data, na-enwe ike ịhazi agba, akara akara, nghọta, ịdebanye aha, gụnyere iwu na ịchekwa ozugbo na faịlụ ụdị geoServer (sld). Ọ dịghị onye ọ bụla nwere ezi uche na-arụ ọrụ nke a ka koodu dị ọcha na GeoExplorer bụ ezigbo ihe ngwọta -n'agbanyeghị na ọ na-eme ọtụtụ ihe-.
Versiondị arụnyere nke GeoServer gụnyere njikọ nke mbubata data, na-enwe ike ịmepụta mmalite sitere na nhazi mpaghara, gụnyere PostGis nke enwere ike ịkwaga data site na otu isi gaa na nke ọzọ gụnyere site na Localhost gaa ọrụ a kwadoro; Ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ntinye data a na-edozi nsogbu OGR2OGR na, ọ gwụla ma ha ejiri akara njikwa ahụ, tụfuo nsogbu mgbe ị na-ebugo ọtụtụ ngwugwu multipolygon, ebe ọ bụ na ndabara dị mfe polygon.
N'okwu a, ọrụ WPS na-apụta n'ihi na nhọrọ ịwụnye m kpebiri itinye ha.
GeoServer Add-ons dị ka CSS Styling, CSW, Cloustering na nkwado maka ụlọ akwụkwọ ihe oyiyi GDAL nwere ike ịgbakwunye n'oge echichi. Enwekwara mgbakwunye maka PostGIS nke na-akwado igwe ojii na ọdụ data na GDAL / OGR nwekwara ike ịwụnye dị ka onye ahịa. Maka ndị mmepe enwere otu nhọrọ ịwụnye Webapp SDK na GeoScript.
N'adịghị ka ụdị m kwadoro na sava ahụ, m na-ahụ na enwere isi mmalite data enwere ike, nke a ga-agbakwunye n'ezie ma n'ọnọdụ nke ụdị na-abịa na OpenGeo Suite, ọ na-abịa na ederede comma-delimited, H2, H2 JNDI, SQL Server, OGR, Oracle na ohere nke enwere ike site na nha.
Kedu maka Qgis?
Nke kachasị mma, maka Qgis ha mepụtara nnukwu ngwa mgbakwunye akpọrọ OpenGeo onye nyocha nke ị nwere ike iji mmekọrịta na Postgres nchekwa data yana GeoServer. Si ebe a ị nwere ike idezi slds, megharịa oyi akwa, otu oyi akwa, dezie aha, hichapụ, lee ebe ọrụ, akpa nchekwa, wdg.
Ọ bụrụ na ewepụla akwa, a na-ewepụ sld; Ihe a niile nwere ike ịhazi ya ma n’ikpeazụ ọ rụpụtara ọrụ n’aka onye ahịa na-achịkwa ihe na-eme, na ngakọrịta nwere ike ịbụ iji REST API.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ọ na - enweghị bụ shp2psql mana ọ naghị eju m anya na mgbe ahụ ha jikọrọ ya na otu panel ahụ, ikekwe dị ka Spit ngwa mgbakwunye na-adịghị ka UI na-echekwa njikọ ndị ahụ, ọ nwere ike bulite ọtụtụ akwa na ngọngọ, ihe mgbochi ahụ na-abawanye Ozi n’ezie na ozi njehie kachasị nghọta.
Ihe OpenGeo Suite a anaghị ekwu na nke a bụ ụzọ esi eme anwansi. Mana ọ ga-akpali ọtụtụ akụkụ nke obodo gaa na nke a, ọkachasị ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị na-ere ihe ọmụmụ ga-ahọrọ ịkụzi ụzọ a nke na-eme ka usoro mmụta dị mkpụmkpụ.
Ngwakọta ahụ dakọtara na ngwaọrụ ndị ọzọ enwere ike ịnwe n’elu sava ahụ.
Mmetụta dị a comesaa na-abịa na OpenGeo Suite
Anyị ga-ahụ mmetụta nke a nwere na obodo, n'ihi na n'azụ Boundless enwere ndị nwere ọtụtụ ahụmịhe n'ọhịa, ndị sonyere na mmepe nke ngwa ọrụ na ọba akwụkwọ nke na-eme ka mpaghara a na-aga n'ihu. Mana kachasị na ọzụzụ na azụmaahịa na ọrụ azụmaahịa, nke na-efukarị na ọkwa teknụzụ. Iji kwuo ma ọ dịkarịa ala isii:
Eddie Pickle na Ken Bossung, ndị guzobere IONIC, ụlọ ọrụ zụrụ ERDAS na 2007 ugbu a ọ bụ Leica nwe ya.
Andreas Hocevar na Bart van den Eijnden, ndị a na-emikpu mmiri na mmepe nke OpenLayers 2 na GeoExt.
Victor Olaya, onye hapụrụ anyị ihe nketa nke SEXTANTE,
Paul Ramsey, nke onye mbido izizi nke PostGIS.
Mmetụta ọzọ dị mma bụ n'ịdabere na nnukwu ụlọ ọrụ, nke, na mpụga ịbụ nnukwu anụ ahịa n'ahịa - nke na-abụkarị ihe ize ndụ - na-enye iwu megidere asọmpi megide ụlọ ọrụ nzuzo nke akụkụ ndị ọzọ dịka nkwado, ntụkwasị obi, nchekwa na Njikwa mma maka mmepe.
Ọrụ dị iche iche nke Boundless nwere, sitere na mbugharị ikpo okwu na ọrụ nkwado kwa afọ, ọ dị anyị ka ọ dabara na azụmaahịa na ụlọ ọrụ na obere ntakịrị ịghọta ihe dị iche na ịnwe nkwado mpaghara na nkwado azụmahịa. Ahịa a ekwesịghị ịdị nfe, mana anyị ji ezigbo anya hụ etu ụlọ ọrụ si eto n'echiche, na-eji mmepe sọftụwia na ozi dị ka akụ bara uru, n'ihi ya, ha jisiri ike na-ekenye ndị ọkwọ ụgbọ ala ọrụ igwe ụgbọ ala ha, ka ha were mkpuchi na ọrụ pụrụ iche. nke ụlọ ọrụ nkesa.
Na ụdị ihe eji emeghe, enwere ohere maka onye ọ bụla. Ya mere, ihe Boundless na-enye dị, enwere ohere ibu onye ibe; karịrị ike nke ndị chọrọ ịkwalite ikike ha nwere ịre ọrụ n'ihe gbasara mmejuputa, ọzụzụ, nkwado ma ọ bụ mmepe. Anyị na-atụle ihe atụ bara uru na nke ezigbo nkuzi iji mụta ma gbakwunye mbọ nke gvSIG Foundation na-ewe n'ụzọ ọzọ, nke anyị ga-ekwu maka oge ọzọ.
Budata OpenGeo Suite.
Previous Post«Previous Free online ntụgharị maka GIS - CAD na Raster data
Next Post Okwu 8.5 Microstation na Windows 7Next »
2 Na-aza "OpenGeo Suite: Ezigbo ihe atụ nke GIS Software chere banyere adịghị ike nke OSGeo nlereanya"
Jose Pabón kwuru, sị:
March, 2016 na
Nwere mmasị na Ndị Mmepụta Ngwaahịa n'okpuru Opengeo Suite iji tinye njikwa geospatial na megaprojects n'okporo ụzọ
Onyinye ebe nchekwa Alberto Altamirano kwuru, sị:
Daalụ nke ukwuu maka akwụkwọ edemede gị. Onwe ya, ha dị ka ihe na-eme mmadụ ọgaranya.
Enyemaka gị dị mkpa maka nyocha m na ime mkpebi.